MOV magaabay: Sida loo jar / Split / goo Quicktime MOV Files
> Resource > Video > Sida loo jar / Split / goo MOV (QuickTime) Files
"Waxaan kamerad digital ah in qaadataa files movie .mov, oo aan geliyaan si aan u computer gurmad. Waxaan jeclaan lahaa inaan la gooyaa qaybo ka mid ah files MOV, kuwaas oo si aan u gaabin. Fikrado?"
- Lois ka forum ah
Sida nin ee kor ku xusan, haddii aad doonayso inaad ka gooyay ah MOV (QuickTime) fayl in dhererka gaar ah ama laga soo gooyay oo qayb ka mid ah off ah MOV (QuickTime) video, magaabay ah MOV cajiib ah waxay noqon kartaa waxa ugu jecel yahay oo aad u. Ma aan helin sida qanacsan MOV video file ah sida aad ku xigeen? OK, waxaan ku talinaynaa Wondershare Filmora (asal ahaan Wondershare Video Editor) ( Filmroa u Mac (Originally Wondershare Video Editor for Mac) ).
Easy in la isticmaalo MTS / M2TS magaabay: Filmora Wondershare (asal ahaan Wondershare Video Editor)
In la siiyo hab aad u sahlan oo dhakhso ah si ay u dhinto MOV si dheer.
Goo qayb ka mid ah MOV videos.
Save file MOV aad qaabab kala duwan, gubi in DVD ama si toos ah online geliyaan.
1. Ku dar MOV (QuickTime) files si magaabay MOV this
Marka hore, waxaad u baahan tahay in aad ku darto file MOV aad rabto in aad googooyeen album this app ee. Si fudud iyo si deg deg ah in aad shaqo ku samayn kartaa adigoo gujinaya ah "Import" button on geeska kore ee bidix ee interface ama si toos ah iyaga jiidayeen galay album this app ee. Markaas sii wadaan jiidi faylka si Timeline ah
2. Iska yaree MOV (QuickTime) file
Markaas ka guurto sare ee cas Time Tusiyaha in boos kasta oo aad rabto in aad ka dibna mar kasta oo riix badhanka maqas ah. Sidaas, waxaad yareyn kartaa MOV ah oo wuxuu galay dhowr clips. Muddadaan, riix badhanka ku saabsan dhinaca kore ee bidix si loo badbaadiyo mashruucan u gurmad ujeedada.
Clip kasta yaree galay file hal
Haddii aad rabto in aad dhoofin clip kastaba file hal, dajiyaan mashruuca badbaadiyey mar kale iyo mar kale, oo mar walba oo aad u baahan tahay in ay tirtirto wixii clips kale oo kaliya dhoofin clip kaliya ee aad rabto in aad file galay hal.
Goo clips aad doonayay ka file MOV ah ama laga gooyay MOV ah in dhererka gaar ah
Marka aad file MOV jari dhowr clips, tirtirto dhammaan clips aadan rabin oo kaliya kuwa aad doonayay tagay.
3. Dhoofinta MOV cusub (QuickTime) file
In tallaabadii u dambaysay, waxaad u baahan tahay riix "Abuur" button, xulo qaab MOV ee "Qaabka" category ee suuqa kala pop-up ah. Marka lagu sameeyey, aad file cusub MOV galka wax soo saarka ka heli kartaa.
Video Tutorial: Sida loo jar / Split / goo MOV Video
Sida loo soo biir MOV Video Files